Gaghị eche n'echiche na ihe ọ ga - ekwe omume ịmeghe Nokia 9 Pureview | Gam akporosis
Otu n'ime isi mkpesa nke Nokia 9 PureView ọ bụ gị tụkwasịrị obi akara mkpisiaka nyocha. Izu gara aga, HMD Global mechara mepụta a melite, nke a na-ekwu iji dozie nsogbu na nyocha.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ihe dịwanye mma na ngwa ọhụụ ọhụrụ ewepụtara maka flagship, mmelite ahụ yiri ka ọ emetụtala otu onye ọrụ n'ụzọ na-adịghị mma. Ekwentị na-agbachi site na ihuenyo site na iji ihe ọ bụla. You ga-enwe ike ikwenye na anyị ga-agwa gị ọzọ?
Onye nwe ihe metutara onye gabigara ya bu @onyedikachi_. Ọ kesara vidio na Twitter na-egosi nsogbu ahụ na nyocha akara mkpisiaka Nokia 9. Ejiri mkpịsị aka na-enweghị ndebanye aha na ọbụna otu chịngọm akpọchi ekwentị ahụ! Ọzọkwa, ọ na-agbakwụnye na ya nwekwara ike ịmeghe ya na mkpụrụ ego na uwe aka akpụkpọ anụ. Zingtụnanya…
Nke a bụ nke m Nokia 9 mkpisiaka mmetụta nke, ekwentị nwere ike-emeghe site na-ata ata chịm ma ọ bụ onye ọzọ mkpịsị aka. Ọbụna a na-emeghe ya na mkpụrụ ego ma ọ bụ uwe akpụkpọ anụ. Biko nyere m aka ịhazi ụdị Nokia 9. pic.twitter.com/Thce3nB2fr
- Ntughari Pixel (@decodedpixel) April 21, 2019
Nsogbu a akwụsịghị ọbụlagodi mgbe edebanyeghachi akara mkpịsị aka ọhụrụ. Otú ọ dị, enweghị nkwupụta sitere n'aka HMD Global n'okwu ahụ.
Otu ihe anyị chọpụtara bụ na enwere ihe nchebe ihuenyo iko na ngwaọrụ ahụ. Ọ bụ ezie na ndị na-echebe ihuenyo na-egbochi arụmọrụ nke nyocha akara mkpịsị aka ihuenyo, ekwesighi ka agbachi ngwaọrụ ahụ n'ụzọ dị mfe dịka onye ọrụ kwuru.
HMD Global nwere ike ịhapụ mmelite ọzọ iji dozie nsogbu ahụ, ma ọ bụrụ na ọ zuru ebe niile. N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ n’oge, onye ọrụ ga-edozi ya.
Cheta nke ahụ Nokia 9 Pureview bụ njiri elu dị elu nke Qualcomm si Snapdragon 845 na - akwado, 10nm SoC nke na nke a jikọtara ya na 6GB nke RAM na 128GB nke ebe nchekwa dị n'ime, ma kwadoro ya site na batrị ikike 3,320mAh. Ngwaọrụ, n'aka nke ya, nwere ihuenyo FullHD + pOLED 5.99-inch, penta-kamera azụ nke mejupụtara sensọ 12 MP na igwefoto selfie 20 MP.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Gaghị eche n'echiche ihe ọ ga - ekwe omume ịmeghe Nokia 9 Pureview